Legioma | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Inona no holatra azo hanina, karazana sy karazana holatra
Ny fossa dia an'ny karazana Mushrooms of the Fizalakriev family. Misy karazana holatra azo hanina sy tsy azo sakanana. Ny holatra dia manana kapa kely kely amin'ny 2 ka hatramin'ny 10 santimetatra. Ny holatra tanora dia manana bonnet convex amin'ny rindrina manify, ary ny matoantenin'ny olona kokoa dia manana monochromatic, mavo na marika. Zava-dehibe izany! Tsy maintsy mianatra manavaka ny holatra azo hanina sy tsy azo ovana isika.
Fanosehana any amin'ny toeram-ponenany any an-trano: ahoana no hiomanan'ny ririnina, inona no azo atao aminy
Zucchini dia vokatra azo avy amin'ny sakafo mahavelona miaraka amin'ny vitaminina mpanankarena sy fanandramana tsara. Ho zava-dehibe amin'ny sakafo ianao, raha tianao ny sakafo mahasalama sy mahasalama. Raha ny marina, betsaka loatra ny zokiny vao afaka mihinana mandritra ny vanim-potoan'ny fahavaratra, ary mba hankafy ny tsiron'ny legioma mandritra ny taona, dia maro ireo mpikarakara vehivavy no manomana fiomanana: legioma sy salady voankazo, marinadina ary ny toaka.
Ahoana ary inona ny legioma mety ho maina amin'ny ririnina
Ny tsy fisian'ny vitaminina voajanahary dia misy fiantraikany amin'ny vatan'ny olombelona amin'ny vanin-taona ririnina. Ny tsy fahampian'ny masoandro, ny legioma sy ny voankazo vao miteraka dia mampihena ny hery fanefitra, ny tsy fahampian-tsakafo vitaminina ary ny loza ateraky ny aretina ARVI. Na izany aza, ny teknolojia maoderina dia manome fahafahana, na dia ao anatin'ny vanim-potoana mangatsiaka aza, mba hahazoana maripana ampy tsara - ohatra, avy amin'ny voankazo maina.
Inona no dikany mahasoa sy mampidi-doza?
Na dia eo aza ny hoe i ripaipa dia iray amin'ireo havanao akaiky indrindra amin'ny rambony sy ny radiés, dia vitsy no mitombo ao amin'ny zaridainy, na dia tsy mahafantatra akory aza ny tombontsoa lehibe azony entina amin'ny vatana. Manolo-kevitra ny miezaka hahafantatra ny toetra rehetra ao amin'ity fotony ity sy ny fahafahana mampiasa azy amin'ny sehatra maro samihafa.
Sakafom-boankazo ho an'ny ririnina: 3 mahasalama haingana
Raha tianao ny sakafo voatsin-dabozia, dia mety hiatrika ny olana amin'ny fisafidianana izay sokatra hanokafana androany ianao, inona no tianao kokoa - cucumbers na tomato, izay legioma tsara kokoa miaraka amin'ny ovy (sereal, pasta, sns.). Mba hanafoanana azy dia afaka manomana latabatra ianao amin'ny fampiasana legioma samihafa amin'ny sitrapo.
Inona avy ireo japin'ny legioma ary ahoana no mahasoa azy ireny?
Ny fofona maitso dia manomboka ny andro. Farafaharatsiny izany no hevitra ankatoavin'ny ankapobeny. Ireo zava-pisotro ireo dia tena mamirapiratra, matsiro, mahasalama, mahafinaritra ny tsirony - faly isika mampiditra azy ireo ao anatin'ny sakafo ary heverintsika ho safidy tsara izany. Na dia izany aza dia tsy mitsahatra ny siansa, ary ny fianarana vao haingana dia milaza fa tsy mora ny zavatra rehetra.
Fikarakarana ny tsimokaretina ho an'ny fanangonana amin'ny ririnina: ahoana no ahafahana manapaka sy afaka manasa?
Ny tombony sy ny tsy fahampian-tsakafon'ilay vary varim-bazaha mavokely: ny famaritana, ny sary, ny endriny ary ny fampitomboana
Ny fanandramana tsara indrindra amin'ny mpamboly Rosiana dia ny volombolon'i Volovye Serd: toetra sy fanoritsoritana karazana, sary
Varavarankely karazan-tsakafo "Riviera": toetra, fambolena agrotechnics
"Vaovao Brovafom" ho an'ny akoho: torolàlana ampiasaina
Torohevitra ho an'ny fanangonam-bokatra voaloboka voaloboka amin'ny fahalavoana
Fambolena sy fitazonana laurel ao an-trano
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Legioma